Semalt विशेषज्ञ ब्लैकह्याट रेफरल स्प्याम ट्राफिक कसरी ब्लक गर्ने बारे विस्तृत वर्णन गर्दछ
Semalt विशेषज्ञ ब्लैकहाट वर्थ रेफरल स्पाम ट्राफिक कसरी ब्लक गर्ने बारे विस्तृत वर्णन गर्दछ
BlackHatWorth.com रेफरर स्पाम को एक नयाँ रूप हो जुन हाम्रो साइटहरू क्रल हुँदैछ। यस रेफरर स्पामले विभिन्न Google एनालिटिक्स, जेटप्याक, बिंग एनालिटिक्स, र यान्डेक्स एनालिटिक्स खाताहरूलाई धोखा दिन्छ।
सेल्म्टका एक शीर्ष पेशेवर, आर्टम अबगरियन आश्वासन दिन्छन् कि कालाहट वर्थ.कॉम स्प्याम रेफरललाई गुगल एनालिटिक्समा देखा पर्न रोक्न र ब्लक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
BlackHatWorth.com के हो?
BlackHatWorth.com जनवरी २०१ 2015 मा सिर्जना गरिएको नयाँ डोमेन हो। यो ह्याकर्सको समूहले रेफरर स्पामको लागि प्रयोग गर्दछ। यो रेफरल स्पाम साइट प्रसिद्ध शपिंग वेबसाइटहरू र सुन्दर छविहरूका डोमेनहरूको पछाडि लुकेको छ। बिभिन्न व्यक्तिहरु विश्वास गर्दछन कि यो वैध वेबसाइट हो र यस साइटको यसको खोजी लिंक Yandex र Google, साथै अन्य प्रसिद्ध अनलाइन शपिंग वेबसाईटहरू जस्तै AliExpress.com, Amazon.com, Ebay.com, र Alibaba.com मा छ। BlackHatWorth.com को IP ठेगाना .1 78.१०.60०.२30० हो। यो उस्तै हो जुन सबै अन्य रेफरल स्पाम साइटहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तो कि इस्कालको.रू, लोम्बिया.क., लोम्बकब, इकॉनोमी.कॉम, प्राइसटी.कॉम, डारोडार.कट, र ILoveVitaly.com।
डोमेन, ब्ल्याकहाटवर्थ.कम, एक रूसीको स्वामित्वमा छ। उहि उही व्यक्ति हो जसले अन्य स्पाम वेबसाइटहरूको स्वामित्व गर्दछ ILoveVitaly.com, Darodar.com, र Econom.co सहित। डोमेनको मालिकको नाम सामरास्काया ओब्लास्ट हो, र उसले आफ्नो स्प्याम गतिविधिहरूको लागि ईमेल आईडी (povitaly@mail.ru) दर्ता गरेको छ।
के तपाईंले ब्लैकह्याट वर्ट.कॉम रोक्नु पर्छ!
यदि तपाईं नौसिखिया ब्लगर वा वेबमास्टर हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई लाग्छ कि ब्ल्याकहटवर्थ.कॉम ब्लक गर्न आवश्यक छैन। ठिक छ, तपाईं गलत हुनुहुन्छ किनभने यो रेफरर स्पामबाट आएको ट्राफिकले तपाईंको साइटलाई यसको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण गुमाउँदछ। यसैले, यो स्प्याम वेबसाइट र अन्य स्रोतहरूले तपाईंलाई नक्कली ट्राफिक पठाउनबाट रोक्नको लागि केहि सावधानीहरू विचार गर्नु अनिवार्य छ।
BlackHatWorth.com र अन्य स्पाम क्रलरहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाता र बिंग एनालिटिक्स खातामा सूचीबद्ध हुन्छन्। तिनीहरूले तपाईंको बाउन्स दर बढाउँछन् र तपाईंलाई कम रूपान्तरण दरहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको एनालिटिक्सको साथ गडबड गर्नु र खोज इञ्जिनमा तपाइँको साइटको रैंकिंगलाई क्षति पुर्याउनुको अलावा, स्प्याम रेफरल वेबसाइटहरू जस्तै ब्ल्याकहाटवर्थ.कमान, इकॉनॉमी डॉट, प्राइमगो.कमान, डारोडार.कट, र ILoveVitaly.com ले तपाइँको सर्भर संसाधनहरू र ब्यान्डविथ खानेछ। ।
ब्लकह्याटवर्थ.कम स्पाम रेफरल्स:
यदि तपाइँ रेफरल स्पाम र ब्ल्याकह्याट वर्ट.कट जस्ता डोमेनहरूको बारेमा जान्नु भएको छ भने, तपाईं सजिलैसँग ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वेबसाइट इन्टरनेटमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईं जुमला, WordPress, जेन कार्ट, टमाटर कार्ट वा Drupal प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं सजिलै आफ्नो cPanel मा रेफरल स्प्याम रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईको खातामा लग इन गर्नुहोस् र फाईल प्रबन्धक विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। .Htaccess फाइल खोल्नुहोस् र नयाँ .htaccess फाइल सिर्जना गर्नुहोस्। यो "public_html" फोल्डरमा अवस्थित छ। यहाँ तपाईले कोड थप्नु पर्छ र सेटिंग्स बचत गर्नु पर्छ।
विन्डोज सर्भरमा ब्लैकह्याटवर्थ.कम रेफरर स्पाम रोक्नुहोस्:
यदि तपाईंको साइट विन्डोज सर्भरमा होस्ट गरिएको छ भने, तपाईं ब्लकह्याट वर्ट.कट र अन्य रेफरल स्पाम रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको साइटको कन्फिगरेसन फाइलमा कोडहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र रेफरल स्प्यामलाई सकेसम्म चाँडो रोक्नुहोस्।
यदि तपाईंले यी चीजहरूलाई दिमागमा राख्नुभयो भने, तपाईं सजिलै ब्ल्याक गर्न सक्नुहुनेछ र ब्ल्याकह्याट वर्ट.कॉम स्प्याम र अन्य समान रेफरल स्प्यामलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं सावधानी अपनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले पूर्ण यूआरएल, http://blackhatworth.com लाई रोक्नु पर्छ, तपाईंको साइटको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। तपाईले आफ्नो थिमको हेडर। Php फाईलहरूमा मुख्य हेडर ट्यागहरूको बीचमा कोड थप्न सक्नुहुन्छ।